Marketing amin'ny mailaka mandeha ho azy sy ny fahombiazany | Martech Zone
Mety nahatsikaritra ianao fa manana programa mitete momba ny varotra miditra izay azonao atao ny misoratra anarana amin'ny tranokalanay (tadiavo ny solila maitso amin'ny endrika). Ny valin'ny fampielezana mailaka mandeha ho azy dia tsy mampino - mpanjifa maherin'ny 3,000 no nisoratra anarana niaraka tamin'ny mpisoratra anarana tsy vitsy. Ary mbola tsy namadika ny mailaka tamin'ny mailaka HTML tsara tarehy akory izahay (hita ao amin'ny lisitry ny zavatra tokony hatao izany). Ny mailaka mandeha ho azy dia lalana iray tiantsika hidirana hatrany. Tsy hahafoy ny isan'andro sy isan-kerinandro mihitsy izahay gazety ara-barotra, fa ny fananana safidy manokana ho an'ny mpamakintsika mba hiroboka amina lohahevitra manokana dia làlana tsara tian-tsika hitrandrahana bebe kokoa.
Ny marketing amin'ny mailaka no tompon'ny fivoarana. Aiza koa an-Amaritana ny Datin'ireo Ny fomba marketing dia mijanona ao aoriana, fanovana mailaka, fanitsiana ary fahefana hatrany hatrany. Tamin'ny taon-dasa, raharaha lehibe tokoa ny fandraisana andraikitra mailaka. Ny mpampiasa dia niditra an-tserasera lavitra, ary ny mijanona amin'ny marketing amin'ny mailaka mifandraika dia tsy maintsy nanjary nandray andraikitra tamin'ny fitaovana sy fitaovana rehetra. Ny mailaka izao dia tsy tokony ho mamaly fotsiny, fa tokony ho lasibatra, ara-potoana ary ho azy manokana. Adi Toal, Mpiorina
Ireo orinasa mampiasa automatique marketing mba hikolokoloana ny vinavina dia miaina 451% fitomboan'ny fitarihana mahay. Isa lehibe izany - ary niara-nametraka ny Instiller ity sary ity izay manome porofo fa ny automatisation email dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fahombiazan'ny varotra B2C sy B2B.
Mazava ho azy, ny mailaka mandeha ho azy dia tsy fampielezan-kevitra mitete opt-in toa antsika. Izy io ihany koa dia misy mailaka voatazona valiny mandeha ho azy ary koa fanentanana mitete mandeha ho azy izay atomboka rehefa misy hetsika ataon'ny mpamandrika iray. Ireo mailaka voatondraka dia salan'isa misokatra 70.5% ambony sy 152% taha ambony amin'ny tsindry farany raha oharina amin'ny raharahambarotra toy ny mahazatra hafatra ara-barotra. Nahoana? Ny fotoana sy ny maha-izy azy manokana dia mahatonga ireo mailaka ireo ho hafatra manan-danja indrindra izay azonao atomboka ho azy.
Momba ny Instiller
Instiller dia nanangana vahaolana automatique mailaka izay manome ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny maso ivoho mba hanomezana serivisy marketing amin'ny mailaka feno ho an'ny mpanjifa. Ny fizotran'ny automatisme dynamique, ny autoresponder, ny programa miarahaba, ny mailaka fitsingerenan'ny andro nahaterahana, ny fanamafisana ny famandrihana, ny fitahirizana ary ny atiny mavitrika dia singa iray amin'ny sehatr'izy ireo avokoa - tsy misy dikany ny fahombiazan'ny automatisation mailaka avy amin'ny infografika!
Tags: adi toalmailaka an'ny masoivohoAutomation workflowautorespondersmailaka fitsingerenan'ny andro nahaterahanafanamafisana ny famandrihanafampielezana dripfivezivezena mandeha ho azy mavitrikavotoaty mavitrikaautomation emailworkflow email mandeha ho azymailaka ho an'ireo masoivohopersonalization mailakafotoana emailmpanodinaautomation marketingmikolokolo fanentananamitaiza filaharanamailaka naterakamailaka tongasoa
Torohevitra Marketing amin'ny fialantsasatra ho an'ny varotra sy ecommerce
Fananganana ny orinasanao amin'ny alàlan'ny fihainoana an-tserasera